Ifulethi umugqa wokuqala ogwini - I-Airbnb
Ifulethi umugqa wokuqala ogwini
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Eugenio
U-Eugenio Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elihle elinendawo ekahle ye-Altea, esitezi sesihlanu lapho ulala khona ulalele amagagasi. Ithala elihle, amagumbi amabili okulala...l Ulwandle olunezinyathelo ezimbili ukusuka ekhaya. Ikhululekile kakhulu, ivuselelwe futhi ine-WIFI esheshayo.
Minyaka yonke senza ukunakekelwa kanye nokwenza ngcono okuqhubekayo, sivuselela noma sithenga amathuluzi amasha wekhaya. J Sinemininingwane nezihambeli ezifana nekhofi, amanzi nezithelo zasendaweni, amawolintshi ngoNovemba kanye neNísperos ngoMeyi.
Ifulethi, uPilar nami silisebenzisa, lapho singakwazi, ekwindla nasebusika. Yintandokazi yethu "ye-escondite". Sinothando olukhulu ngayo futhi sikwazile ukuhlale sinethezekile futhi, ifulethi elithokomele, uzolithola lapho ufika.
4.85 · 149 okushiwo abanye
Mina, u-Eugene, ngizoba ngumbungazi wakho owuthola efulethini futhi ngikunike izikhiye futhi ngichaze Indlu, kanye nendawo eyizungezile futhi ngizokunikeza ukuvakasha okuhlongozwayo komuntu siqu noma amaholide noma imicimbi yamanje. Uma ngezizathu uze e-Altea ngemva kuka-21:00 thinta ungithengela isiphuzo. Ngemva kokukunikeza okhiye futhi ngichaze mayelana neholide, i-Altea nezindawo ezizungezile, ngikhetha ukungakuphazamisi futhi ngijabulele i-Altea nefulethi. Uzothola isethi yamathawula ahlanganisa ithawula lobuso nezandla kanye nelinye ithawula lokugeza laso sonke isivakashi. Amashidi asanda kuhlanzekile nezinto ezisetshenziswayo ezahlukahlukene. Lawa mashidi namathawula ekugcineni kokuhlala kwakho uwavumele endlini yokugezela bese siyawasha. Sicela uthanda amathawula olwandle awasetshenziswa. Ngiyabonga ukuthi ungangithinta ngocingo noma nge-inthanethi futhi uma ngikwazi ukuphendula imibuzo yakho, ngicela ungithinte uzokwenza. Nami ngiyathanda ukuthi ukusixosha ngikubheke ngabomvu ukuphawula kwakho futhi ngiyabonga ukuhlala kwakho
Mina, u-Eugene, ngizoba ngumbungazi wakho owuthola efulethini futhi ngikunike izikhiye futhi ngichaze Indlu, kanye nendawo eyizungezile futhi ngizokunikeza ukuvakasha okuhlongozway…
UEugenio Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: VT-463534-A